Fanorenana tsy ara-dalana – Trano nazera nahiana handoto ny farihin’i Mandroseza - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fanorenana tsy ara-dalana – Trano nazera nahiana handoto ny farihin’i Mandroseza
Trano valo, niorina tsy ara-dalàna teny amin’ny manodidina ny farihin’i Mandroseza, no noravan’ny kaominina eto an-drenivohitra,
tamin’ny talata hariva teo. Nitaraina ny fiangonana Katolika, mifanila toerana aminy fa lasa misy manao maloto ka mitondra fofona maimbo ao am-piangonana.
Misy koa nanorina lava-piringa eny amoron’ ny farihin’i Mandroseza. ”Mahasarotiny anay ny fahadiovan’ny rano amin’ ny farihy fa io no mamatsy ny tanànan’Antananarivo. Trano valo no narodana androany noho izany”, hoy ny talen’ny kabinetra ao amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra.
Niala ny fokontany. ”Tsy mahazo manome alalana amin’ny fanorenana izahay. Tsy fantatra izay nahasahiany nanao trano biriky sady naka ny lokon’ ny kaominina mihitsy. Tsy marina ny filazana fa izahay no nanome alalana azy”, hoy Ratsimba Grégoire, sefo fokontany.
Mitohy ny asa fanadiovana, indrindra ho an’ireo tsy manara-dalàna amin’ny sehatry ny fanorenana ataon’ny kaominina Antananarivo renivohitra. Trano vitsivitsy no nanaovana izany tetsy Ankazomanga amin’ny Boulevard de l’Europe iny, omaly.
Loza, Mpanoratra Rijakely, 30.08.2012, 09:01	FIARAHAMONINA